I-Q & A ye-Sinocare SARS-CoV-2 Antibody Test Strip-Izindaba-Sinocare
I-Q & A ye-Sinocare SARS-CoV-2 Antibody Test Strip
Isikhathi: 2020-05-08 Hits: 194
1. Ungawathola kanjani amacala aqinisekisiwe?
Cabanga amacala ngobunye bobufakazi obulandelayo bendabuko noma bobuzwe:
a. I-real-time fluorescent RT-PCR ikhombisa i-coronavirus nucleic acid entsha;
b. Ukulandelana kwezakhi zofuzo kuthakazelelwa kakhulu ukwazi i-coronavirus entsha
c. Ama-IgM wegciwane elithile le-IgM ne-IgG ayatholakala ku-serum; I-IgP yegciwane elithile le-IgG
kuyabonakala noma kufinyelela ekuphakameni okungenani kokukhuphuka okungama-4 ngesikhathi sokuqunjelwa kuqhathaniswa nesigaba esibuhlungu.
2. Kusho ukuthini uma ngibe nomphumela omuhle wokuhlolwa?
Uma unomphumela wokuhlolwa okuvumayo, kungenzeka ukuthi unayo virus. Ngakho-ke, kungenzeka futhi ukuthi ungabekwa wedwa ukuze ugweme ukusabalalisa igciwane kwabanye. Kodwa-ke, ngenxa yezinto zokuphazanyiswa komthombo ongaziwa, umphumela wokuhlolwa usengaba muhle obizwa ngokuthi une-negative. Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo uzosebenza nawe ukunquma ukuthi ungakunakekela kanjani kangcono ngokuya ngemiphumela yokuhlolwa kanye nezinye izici zomlando wakho wezokwelapha, nezimpawu zakho, ukuvezwa okungenzeka, kanye nendawo okuyo izindawo osanda kuzihambela.
3. Kusho ukuthini uma ngiba nemiphumela emibi yokuhlolwa?
Umphumela wokuhlolwa ongemuhle usho ukuthi i-antibody ebangelwe yi- virus ayitholakalanga kusampula sakho. Ngoba virus, umphumela omubi wokuhlolwa kwesampula eqoqwe ngenkathi umuntu enezimpawu ngokuvamile kusho ukuthi virus akubanga ukugula kwakho kwakamuva.
Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi lolu vivinyo lunikeze imiphumela engemihle (engalungile) kwabanye abantu abane- virus. Lokhu kusho ukuthi usengaba nakho virus noma ngabe ukuhlolwa akulungile. Uma kunjalo, umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo uzobheka umphumela wokuhlolwa kanye nazo zonke ezinye izici zomlando wakho wezokwelapha (njengezimpawu, ukuvezwa okungenzeka, kanye nendawo okuyo izindawo osanda kuzihambela) ekunqumeni ukuthi uzokunakekela kanjani. Kubalulekile ukuthi usebenze nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukukusiza uqonde izinyathelo ezilandelayo okufanele uzithathe.
4. Kungani kufanele ngisebenzise lo mkhiqizo?
Okwamanje, indlela esetshenziswa kakhulu yokuxilonga esetshenziswa kakhulu ukuhlolwa kwe-nucleic acid, kepha le ndlela sekufakazelwe ukuthi ayikwazi ukuthola bonke abathwali begciwane, ikakhulukazi lapho kuhlolwa amasampula amadala asetshenziswa ngaphezulu kwendlela yokuphefumula. Emacaleni aqinisekisiwe, kwesinye isikhathi ukuhlolwa okuningi nokuhlolwa okunamasampula amaningi kuyadingeka ukuthola imiphumela emihle. Futhi kunesimo sokuthi izinga eliphakeme leziguli ezisolwayo alikwazi ukuthola imiphumela emihle ngokuhlolwa kwe-nucleic acid. Kunezizathu ezine ezingaba khona:
1) imithwalo yegciwane emasampulini aphezulu okuphefumula iphansi kakhulu kunamasampula epheshana lokuphefumula aphansi virus iziguli
2) imithamo yegciwane ekhulula iziguli esigabeni esihlukile sokutheleleka iyahlukahluka ngobubanzi;
3) ukuqoqwa kwekhwalithi ephezulu ye-swab specimen kudinga izisebenzi zezempilo ezinekhono;
4) Ama-reagents we-PCR avela emithonjeni ehlukene anokuhluka okukhulu.
Lezi zingqinamba ezingenhla zibeka izinselelo ezinkulu ekuhlinzekweni kokwelashwa okusekela impilo okwenziwa ngesikhathi nokuzehlukaniswa. Ngakho-ke, ukutholwa kwe-serological kudingekile kakhulu.
Ukubaluleka komtholampilo othile kanye nokubaluleka kokutholwa kwe-serological kwe- virus indawo elandelayo:
1) ngecala elisolwayo lehhovisi lodokotela lokuqala elivakashelayo kanye necala eliqinisekisiwe ngokuxilongwa komtholampilo kepha ngaphandle kokuhlolwa kwegciwane le-nucleic acid, imiphumela emihle ye-antibody ingasetshenziswa njengosizo ekutholeni virus;
I-2) yokuxhumana okusondelana okunempilo nomphumela we-antibody omuhle, kufanele ibhekwe njengezithwali ezinokwenzeka, yandise isikhathi sokubekelwa eceleni, ithuthukise imvamisa yokuhlola i-nucleic acid, ikhulise izinhlobo zesampula zokuhlola i-nucleic acid, futhi yenze uphenyo lokuxhumana olusondele;
3) iziguli ezivivinywa yi-virus ye-nucleic acid, imiphumela emihle ye-serum antibody ikhombisa ukuthi impendulo ethile yokuzivikela komzimba ifakwe emzimbeni, engasiza odokotela ukwahlulela ukuxhumana phakathi kokuzivikela komzimba nokuthuthuka okulandelayo kwesifo sesiguli;
I-4) esetshenziselwa ukuhlolwa okuningana kwamazinga we-serum antibody kwiziguli ze-convalescent, phakathi kwazo lapho i-titer antibody plasma ephezulu ingasetshenziswa ekwelapheni iziguli ezinzima;
5) hlanganisa nokuhlolwa kwe-viral nucleic acid ukuthola abathwali begciwane abangavela kubantu abalulekile, njengabahambi emazweni aqhamukayo noma ezifundeni, ababambe iqhaza emihlanganweni noma emicimbini ebalulekile, nabantu ababuyela emsebenzini noma esikoleni. Hlukanisa futhi ubheke abantu abanegciwane le-nucleic acid negative kodwa eline-antibody positive, ukuze kutholakale okungaba khona virus ukutheleleka ngesikhathi, ukunciphisa ingozi yokudlulisela.
Ikhasi Langaphambili: UKUSETSHENZISWA OKUHLOSIWE KWE-Virus IgM-IgG ANTIBODY TEST
Ikhasi elilandelayo: Izeluleko ezi-5 zesifo sikashukela ngaphansi kokuqubuka kwegciwane